သမိုင်း/ရာဇဝင်လာ ဗမာတွေရဲ့ ရက်စက်မူ့များ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« WhyaFormer Buddhist Christian accepted Islam? TheDeenShow
ဘာမျှမတတ်တဲ့ ” မိုးကျရွှေကိုယ် ” အရာရှိတွေရဲ့ အဟိန်းအဟောက်မခံနိုင်လို့၊ အလုပ်ထွက်ရင် ” ဦးဏှောက်ယိုစီးမှု ” တွေပဲ။ »
အောက်မှာ စာအုပ်နံမည်၊ စာအုပ်ထုတ်တဲ့ခုနစ်၊ စာရေးဆရာ အပြည့်အစုံပေးထားတယ်။ အာသံသမိုင်းဆရာတွေ မှားကြောင်း Challenge လုပ်ပါ။[ “Assam’s History and its Graphics” by Pathak Guptajit Pathak Niranjan Ch, Published In 2008]
This entry was posted on July 21, 2013 at 1:17 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.